Budata Windscribe maka Windows
Free Budata maka Windows (17.12 MB)
Windscribe (Nbudata): Ihe kacha mma nefu VPN mmemme Windscribe kwụpụtara yana atụmatụ ya dị elu na atụmatụ efu. Ihe omume VPN, nke na-enye ohere iji data eji eme ihe karịa 10GB, na-enye atụmatụ ndị VPN akwụ ụgwọ dị ka firewall, ad blocker, tracker blocker, njikwa ọsọ, ọnọdụ nzuzo, abụọ VPN, P2P, nefu. Ọ bụrụ na ị na-achọ ngwa ngwa, dị elu na nefu VPN, ana m akwado Windscribe, nke na-enye 10GB nke bandwit kwa ọnwa kpamkpam nefu.
Nwere ike iji ya na Windows, Mac, iPhone, iPad, Android, ngwaọrụ ọ bụla ịchọrọ. Firewall, hotspot echekwara, ọnụ ụzọ nnọchibido (ịmepụta ihe nnọchiteanya sava na netwọkụ gị maka ngwaọrụ ndị ọzọ), ngbanwe na-agbanwe agbanwe (IKEv2, OpenVPN UDP,Ọ bụ ezie na atụmatụ nke ijikọ site na TCP ma ọ bụ ọdụ ụgbọ mmiri nzuzo na-adọrọ uche; Ihe nkwụnye ihe nchọgharị ahụ na-ejikwa ọsọ ọsọ (na-ahọpụta ebe kacha mma na-akpaghị aka, igbochi mgbasa ozi na ndị na-eso ụzọ, ịgbanwe mpaghara oge, ihichapụ kuki, ịgbanwe onye ọrụ, ịmepụta njikọ echekwara. Maka nke a, ana m akwado gị ka ị budata ma desktọọpụ ngwa na ndọtị ihe nchọgharị.
Detuo ma chọgharịa na nzuzo.
Mepee ọdịnaya ejiri machibido geo.
Gaa gafee nchebe VPN dị mfe.
Were gị nchọgharị akụkọ ihe mere azụ gị ili.
Kwụsị ịkọ ozi nkeonwe.
Nha faịlụ: 17.12 MB
Mmepụta: Windscribe Limited
Kacha ọhụrụ na: 17-12-2021
AVG Secure VPN ma ọ bụ AVG VPN bụ mmemme VPN nefu maka Windows PC, Mac kọmputa, ekwentị gam akporo...
VPNhub bụ mmemme VPN nefu, echekwara, ngwa ngwa, nkeonwe yana enweghị njedebe nke saịtị Pornhub...
Avast! SecureLine VPN bụ mmemme VPN na -enye ndị ọrụ ohere ịnweta saịtị ndị amachibidoro wee...
HMA! PRO VPN (Zoo My Ass VPN) bụ mmemme VPN kachasị mma na kachasị ọsọ, na-enye netwọkụ ihe nkesa...
Okwey Proxy Master, Ihe omume VPN karịrị ndị ọrụ 150 nde. Ọ bụrụ na ị na-achọ ihe ultra-ngwa-ngwa,...